डा. गोविन्द केसीद्वारा २३औं दिनमा अनशन स्थगित :
काठमाडौं, साउन ३१ । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै विगत २३ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसीले मंगलबार साँझ अनशन स्थगित गरेका छन् ।
बाढी–पहिरोले देशलाई ठूलो विपत्तिमा पुर्‍याएको भन्दै डा. केसीले अनशन स्थगित गरेका हुन् ।
मंगलबार साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको अनशनस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले सबैको ध्यान विपत्तितर्फ केन्द्रित गर्न बाधा नपुगोस् भनेर अनशन स्थगित गरेको बताए ।
मेडिकल माफियाविरुद्धको आन्दोलन जारी रहेको भन्दै उनले माथेमा प्रतिवेदन समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐन नबनाए पुनः अनशन बस्ने पनि बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा सत्याग्रह स्थगित गरिएपनि ऐन बनाउने क्रममा तोडमोड गरिए फेरि अनशनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ ।
अनशन स्थगित गरेलगत्तै डा. केसीलाई उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालकै आइसीयुमा भर्ना गरिएको छ ।
Published on: 2017-08-15 | Read More
सुनको भाउमा ४०० ले कमी :
काठमाडौं, साउन ३१ । मंगलबार सुनको भाउमा गिरावट आयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार पछ्याउँदै यसदिन स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेर तोलाको ५५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
सुन सोमबार तोलाको ५५ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
मंगलबार चाँदीको भाउमा पनि तोलामा ५ रुपैयाँले कमी आएर तोलाको ७ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
मंगलबार साँझसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस १२ सय ७९ डलर हाराहारीमा कारोबार भएको थियो ।
अस्थायी शिक्षकको परीक्षा सर्‍यो, भदौ १० गते हुने :
काठमाडौं, साउन ३१ । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा एकसातापछि सारेको छ ।
यही भदौ ३ गतेका लागि तोकिएको परीक्षा भदौ १० गतेका लागि तोकिएको आयोगका प्रशासकीय प्रमुख लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी दिए ।
यसअघि पनि आयोगले गत असार २४ गतेबाट भदौ ३ गतेका लागि परीक्षा सारिएको थियो ।
मुलुकभर बाढीपहिरोका कारण आवत–जावत गर्न समस्या परेको भन्दै परीक्षा एकहप्ता पछाडि सार्नु परेको प्रमुख पौडेलले बताए ।
देशभरि कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउन लागि शिक्षा ऐन–२०२८ (आठौं संशोधन)ले गरेको व्यवस्थाअनुसार आयोगले गत चैत १९ गते विज्ञापन गरेको थियो ।
आन्दोलनरत् अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योतिनारायण ढकालले परीक्षा सारेर आफ्ना माग पूरा गरेको बताउँदै शिक्षा ऐन संशोधन गरी परीक्षामा सबै अस्थायीले भाग लिन पाउने र असफल भएमा उचित क्षतिपूर्ती दिइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
यसैबीच, आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुले पाँचदिनको तलब बराबरको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको आयोगले जनाएको छ ।
चीनमा शक्तिशाली भूकम्प :
बेइजिङ, साउन २४ । चीनको सिचुवान प्रान्तमा ७.० मयाग्च्यिुडको भूकम्प गएको चिनियाँ भूकम्प मापन केन्द्र (सीइएनसी)ले जनाएको छ ।
स्थानीय समयअनुसार मंगलबार राति ९ः१५ बजेको समयमा गएको भूकम्पको प्रभाव खासगरी जिउझाइगाओ क्षेत्रमा परेको बताइएको छ ।
भूकम्पको केन्द्रविन्दु ३३.२ डिग्री उत्तरी अक्षांश र १०३.२ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा २० किलोमिटर गहिराइमा परेको सीइएनसीले जनाएको छ ।
भूकम्पबाट उक्त क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे अहिलेसम्म केही जनाइएको छैन ।
Published on: 2017-08-08 | Read More
रामेछापमा बाढी–पहिरोबाट विस्थापितलाई प्रतिपरिवार पाँच लाख : गृहमन्त्री ;
रामेछाप, साउन २१ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रामेछापको लिखु गाउँपालिकामा बाढी–पहिरोबाट विस्थापितहरुलाई एक हप्ताभित्र खानेपानी, सडक र विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् ।
शनिबार रामेछापमा बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
गत असार ३१ गते रामेछापको छरौतीखोलामा आएको बाढीले दुईजनाको मृत्यु भएको थियो भने दुईजना अझै बेपत्ता रहेका छन् ।
बाढी–पहिरोबाट २६ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । बाढी–पहिरोबाट विस्थापितहरुलाई जग्गा किन्न प्रतिपरिवार दुई लाख र घर बनाउन तीन लाख रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने उनको आश्वासन थियो ।
यसैबीच, गृहमन्त्री शर्माले बाढी–पहिरोमा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ र विस्थापितलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।
Published on: 2017-08-05 | Read More